The Ab Presents Nepal » भ्रष्टाचारी ठेकेदारसामु प्रधानमन्त्री झुके!
भ्रष्टाचारी ठेकेदारसामु प्रधानमन्त्री झुके!
काठमाडौं –: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले ३३ किलो सुन प्रकरण, यातायातको सिन्डीकेट खारेजीलगायतका काममा जनताको समर्थन पायो ।
तर, न त ३३ किलो सुनको प्रतिवेदन अनुसार कसैमाथि कारबाही भयो, न त यातायातको सिन्डीकेट नै हट्यो । ओली सरकारले बालुवाटारको ११४ रोपनी अतिक्रमित सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउने निर्णय त गर्यो । तर, अहिलेसम्म त्यो काम पनि पूरा हुन सकेको छैन । उक्त जग्गामा नेकपाकै महासचिव बिष्णु पौडेल मुछिए |
अब विशेष अदालतमा मुद्दा परेका निर्माण कम्पनी र परामर्शदाताले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अनुमति लिएर मात्र बोलपत्रमा भाग लिन पाउनेछन् । यसरी ठेक्कापट्टामा प्रधानमन्त्री कार्यालय मुछिएको छ ।
अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा परेका कालिका, पप्पु र इआरएमसीले कुनै पनि बोलपत्र पेश गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट स्वीकृत लिनुपर्छ । तर, कालिकाका विक्रम पाण्डे र इआरएमसीका उद्धवराज चौलागाईले प्रधानमन्त्री ओलीका सल्लाहकार बिष्णु रिमाललाई प्रभावमा पारी मन्त्रिपरिषदबाट अनुमति लिनु नपर्ने निर्णय गराउन लागेका छन् । युनाइटेड पोस्ट साप्ताहिकमा खबर छापिएको छ ।
र, आजै बिहीबार यी भ्रष्टाचार अभियोग लागेका ठेकेदारलाई बोलपत्र पेश गर्न एक पटक अनुमति दिएपछि फेरीफेरी नदिने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्ने तयारी छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा भ्रष्टाचारमा मुद्दा खेप्दै आएका कम्पनीले हरेक ठेक्कामा बोलपत्र पेश गर्नुअघि मन्त्रिपरिषद्को अनुमति लिनुपर्ने ब्यवस्था छ । तर, यो ब्यवस्था भ्रष्टाचार अभियोग लागेका कालिका र परामर्शदता इआरएमसीको प्रभावमा परिवर्तन गर्न लागिएको छ ।
धरहरा निर्माणको परामर्शदाताको टेण्डरमा इआरएमसीले पनि भाग लिएको छ । इआरएमसीबिरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेकाले ऊ कालोसूचीमा छ । उसको टेण्डर कानुनतः सदर गर्न मिल्दैन । तर, त्यही इआरएमसीलाई धरहराको कन्सलटेन्सीको ठेक्का दिनेगरी सेटिङ भइरहेको छ ।